Weerar Khasaare Sababay oo Askarta DF Loogu Geystay Sh/dhexe. – Shabakadda Amiirnuur
November 20, 2017 5:26 am by admin Views: 110
Ciidamo ka tirsan Xarakada Al-Shababa ayaa inta u dhaxaysa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee Shabeelaha dhexe ku weeraray askar dowladda ka tirsan oo socdaal ku jiray, waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaarooyin kala duwan.
Wararka ay heleyso Shabakadda Amiirnuur.com ayaa ku waramaya in hub culus iyo mid fudud ooda looga qaaday kolonyada ciidamada dowladda taasoo inta la ogyahay sababtay in uu dhinto hal askari kaasoo meydkiisu uu ka dhacay gaarigii uu saarnaa, waxaana laga furtay qori nooca Daba miinshaarka ah (BKM) oo uu watay.
Wararka ayaa intaa ku daraya iney jiraan wax yeelooyin kale oo ay la kulmeen askarta dowladda laakin wax faahfaahin ah lagama hayo. Dhawaan ayay ahayd markii uu hogaamiyaha Hir Shabelle, Maxamad Cabdi Waare uu DF ku eedeeyay in ay iclaamisay dagaal aysan qorshe u haynin.